China Yakakwira-kumagumo Camshaft fekitori nevatengesi | SAMUERI
Camshafts chikamu chakakomba cheinjini uye chakabatana necrankshaft kuburikidza necheni kana mabhandi (timing belt, timing cheni), camshafts inotyairwa necamshafts uye zvakare kudzora mavhavha. Hukama uhu hunodzora mweya kune mafuta anosanganisa (echinyakare jekiseni masisitimu) uye pedza nzira yekubuda kuburikidza nekushanda kwemaitiro.
Icho chigadzirwa chakagadzirwa neepamusoro-simba ductile simbi uye inorapwa nepamusoro pekusimbisa tekinoroji yekuvandudza iyo kuneta kusimba kwecamshaft. Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, michina yekurima, jenareta set, yepakutanga mhando, ine chitarisiko chakanaka, kukwirira kwakanyanya, kutsetseka, kupenya nekusimba mushure mekupedza. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Iyo Camshaft inoshandisa aya mavhavha nemakobvu ari pane camshaft shaft ivo pachavo, sezvavanotenderera vachitenderedza vachimanikidza mavharuvhu pasi. Iwo mavhavha ari echirimo akatakurwa (anogona kumanikidzwa mweya actuated) uye kudzokera kunzvimbo yekutanga, kumirira iyo inotevera nguva iyo lobes inotenderera kumashure kutenderera, kuenderera iko kutenderera. Kune ese ari maviri mhepo yekupinda uye yekuzadza nzira yekubuda mavharuvhu uye pane imwe injini dhizaini seDOHC (yakapfuura pamusoro cam) inogona kuve nemaviri seti evhavha pane inlet kana nzira.
Iwe unogona kufungidzira kuti crankshaft yakabatana necamshafts kuburikidza necambelt, uye iyo camshafts yakabatana kune mavhavha, ese ari kushanda mukudyidzana. Munguva yakajairika mashandiro ezvinhu akajairwa camshaft profile inogona kuenderana nehumwe hunhu hunhu, asi pane akasiyana kukosha kwakamisikidzwa-ayo anogona kutochinja iyo cam profil yekushandisa mashandiro- Honda inonyanya kuzivikanwa nehunyanzvi hwakadai.
Kukundikana kwakajairika kwecamshafts kunosanganisira kupfeka zvisina kujairika, ruzha rwusina kujairika, uye kutsemuka. Kupfeka kusinganzwisisike uye kuchema kazhinji kunoitika ruzha uye kutsemuka kusati kwaitika.
(1) Iyo camshaft inowanikwa kanenge kumagumo kweinjini lubrication system, saka mamiriro ekugadzirisa haana tariro. Kana iyo pombi yemafuta isina kukwana kupihwa kumanikidza nekuda kwekushandisa zvakanyanya nguva kana zvimwe zvikonzero, kana mafuta ekuzora akavharika, mafuta ekuzora haakwanise kusvika kune camshaft, kana tambo inosimbisa yeiyo inotakura chivharo inosunga bhaudhi yakakura kwazvo, mafuta ekuzora haikwanise kupinda mugero wecamshaft. Zvinokonzera kusakara kusakara kwecamshaft.
(2) Kupfeka zvisina kujairika kwecamshaft kunokonzeresa musiyano uripo pakati peye camshaft neimba inotakura kuwedzera, uye kutama kweaxial kunoitika kana camshaft ichifamba, zvichikonzera ruzha rwusina kujairika. Kupfeka kusingaenzanisike kunotungamira mukuwedzera kwemukana pakati pechairi cam uye iyo hydraulic tappet. Kana iyo cam uye hydraulic tappet zvabatanidzwa, kukanganisa kunoitika, zvichikonzera ruzha rusina kujairika.
(3) Camshafts dzimwe nguva ine kukundikana kwakakomba senge kuputsa. Zvinowanzoitika zvinosanganisira hydraulic tappets kutsemuka kana kusakara kupfeka, kwakakomba kwakashata lubrication, yakashata mhando camshafts, uye camshaft yenguva giya kuputika.
(4) Mune zvimwe zviitiko, kutadza kwecamshaft kunokonzerwa nezvikonzero zvevanhu, kunyanya kana injini isina kubviswa zvakanaka kana injini yagadziriswa. Semuenzaniso, kana uchibvarura camshaft inobata butiro, shandisa sando kurova zvine simba kana kushandisa sikurudhiraivha kumanikidza kumanikidza, kana kuisa chivharo chinotakura munzvimbo isiri iyo, saka chifukidziro chekutakura hachiwirirane nechigaro chekutakura, kana tambo inosimbisa yeiyo yekuvhara butiro yekusungira bhaudhi yakanyanya kukura. Paunenge uchiisa iyo inotakura butiro, teerera kune miseve yekutungamira uye manhamba ekumusoro pamusoro pechifukidzo chebhegi, uye shandisa torque wrench kusimbisa iyo inobata yekuvhara inosunga mabhaudhi zvakanyanya zvinoenderana neyakataurwa torque.
Yakakwira-mhando mota camshaft:
Anoshanda mota mamodheru Volkswagen
muenzaniso 038109101R / 038109101AH
Impact simba 1000 （mPa）
Pasuru kukura 500 * 20 * 20
Chinyorwa nhamba YD358A
Izvo zvinhu zvakagadzirwa neepamusoro-simba ductile iron uye inorapwa nepamusoro pekusimbisa tekinoroji yekuvandudza iyo kuneta simba reiyo camshaft. Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, zvekurima michina, yepakutanga mhando, ine chitarisiko chakanaka, kukwirira kwakanyanya, kutsetseka, kupenya nekusimba mushure mekupedza. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Inokodzera mota, ngarava, mota dzeinjiniya, michina yekurima, mhando yekutanga.
Pashure: Yakakwira-mhando Cylinder musoro
Zvadaro: Iyo yakazara yakazara yemotokari crankshafts Crankshaft
Auto Spare Zvikamu